तपाईलाइ थाहा छ रोलेक्स घडी कस्तो बिशेषताले संसारमै चर्चित बन्यो ? - Sano Aawaj
तपाईलाइ थाहा छ रोलेक्स घडी कस्तो बिशेषताले संसारमै चर्चित बन्यो ?
१४ आश्विन २०७८, बिहीबार September 30, 2021 by Aayam Khadka
वाकरको ठूलो गल्ती साथीलाई मा’र्नु त थियो नै तर गल्ती छोप्नको लागि साथीको नाडीको घडी नलानु सबुद छोड्नु जस्तै भयो । साथी मा’रेर पानीको ढल फालेको २ हप्तापछि मृतकको शरिरमा चिन्न सकिने एउटै बस्तु थियो, त्यही रोलेक्स घडी । जसको कारण ह’त्यारा पत्ता लागेको थियो ।
Posted in ट्रेन्डिङ, रोचक खबर
Prevपछिल्लो २४ घण्टामा ९११ जना कोरोनामुक्त भए, १२ को मृत्यु
Next३ हप्तामा १०० सापुका बिरामी, यस्तो छ बच्ने उपाय ?